Fivahinianana : Hihodina any Eorôpa i Big Mj -
AccueilVaovao SamihafaFivahinianana : Hihodina any Eorôpa i Big Mj
Taorian’ny Noely tany Toliara, ny famaranana ny taona tao Frantsa niaraka tamin’i Wawa, dia manohy ny seho ataony any ivelany, ary hihodina any Eorôpa i Big Mj. Ny 28 desambra lasa teo izy no nigadona tao Frantsa, ary maromaro ireo firenena hoteteziny amin’ity indray mitoraka ity. Any Belzika no fantatra fa hamaranany ny fitetezam-paritra ataony, nefa efa tafiditra ao anatin’ny fandaharam-potoanany ihany koa ny any Italie, Espagne, Allemagne… Mbola tafiditra ao anatin’ny fampahafantarana ny vokatra farany « Na lingui yo » ireo fitetezana firenena maro ireo, nefa hiangaliany ihany koa ireo hira nahafantarana azy hatramin’izay tao anatin’ny gadona « Traitria » araka ny efa napetrany. Santionany tamin’ireny ary mbola ho entiny amin’ny fampisehoana any Eorôpa ny « Aminao fo ty niany », « Hafa fô », « Célibataire »… izay hiaka farany navoakany tamin’ny taona 2018.
Ny volana desambra lasa teo dia efa nitondra fampisehoana maro tany ivelany ity mpiangaly ny « Afropop » avy any Antsiranana ity, ary niarahany tamin’ny mpanakanto maro izany. Anisan’ireo niray sehatra taminy tamin’izany ry Vaiavy Chila, Flash B, D’Alvis, Mad Max…
Amin’izao fivahinianana ataon’i Big Mj izao, dia nambarany tamin’ny kaonty Facebook-ny fa hamaranany ny fivoahany any ivelany amin’izao fiandohan’ny taona izao ny any Etazonia.
Niakatra ambony dia ambony tampoka ny harenan’ingahy Mamy Ravatomanga teo anelanelan’ny taona 2009-2011. Notombanana 60 miliara Ariary ( 21,1 million d’Euros) ny hereny tamin’izany. Io fotoana io ( 2009-2011) dia tao anatin’ny Tetezamita tanteraka isika ...Tohiny